Xasan Sheekh oo ku eedeeyay dowlada Soomaaliya inay dayacday dacwadda Badda ee Kenya iyo Soomaaliya -
Home News Xasan Sheekh oo ku eedeeyay dowlada Soomaaliya inay dayacday dacwadda Badda ee...
Xasan Sheekh oo ku eedeeyay dowlada Soomaaliya inay dayacday dacwadda Badda ee Kenya iyo Soomaaliya
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haatana ka mid ah musharaxiinta Madaxweynaha dalka ayaa ku eedeeyay dowlada uu madaxda ka ahaa Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inay dayacday dacwada badda ee u dhexeeysa dowlada Soomaaliya iyo Kenya.
Wareysi uu siiyay Xasan Sheekh Maxamuud taleefishinka Goobjoog ayuu ku sheegay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo inuu afartii sano ee la soo dhaafay uu waqti iyo dhaqaale ku bixiyay kala furfurka maamul goboleedyada halkii uu xoogga saari lahaa dacwada badda.
“Dowlada qaddiyada badda kuma mashquulin waxana ay juhdi,dhaqaale iyo waqtiga ay gelisay Gedo iyo Jubaland kala furfuridiisa haddii ay gelin lahayd dacwada badda natiijo ayaa laga gaari lahaa xukuna waa dhici lahaa.”ayuu yiri Xasan Sheekh.
Xasan Sheekh ayaa ku eedeeyay dowlada in ay si ula kac ah uga gaabisay in dacwada badda guul laga keeno kadib markii ay kala dirtey qareenadii iyo aqoon yahanadii u taagnaa dacwada badda.
“Dowlada inay marka Kenya ka hadasho dacwada badda ay ka daba hadasho waa nasiib darro,waxaan ka digayaa in Qatar badan ay ka soo socoto dacwada badda,kiiska waa dayacan yahay, shacabka waa inay ogaadaan, berrina aysan ku baraarugin.”ayuu yiri Xasan Sheekh Maxamuud Madaxweynihii hore ee dalka Soomaaliya.
Dowlada Kenya ayaa markii afaraad ka codsatay maxkamada ICJ in dib loo dhigo dacwada badda ee kala dhexeeysa Soomaaliya,hase yeeshee dowlada Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan aqbalayn in markale dib loo dhigo dacwada badda.
Previous articleDowlada Kenya oo ka hadashay sababta ay u codsatay dib u dhigista Dacwada Badda
Next articleJames Swan oo wadahadal la yeeshay madaxda wadamada ciidamada ka joogaan Soomaaliya